Open for Applications | Falling Walls Lab Myanmar – Impact Hub Yangon
Falling Walls Lab Myanmar မှ ၂၀၂၂ ခုနစ် Falling Walls ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်ကျောင်းသားများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူများအား ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။
နယ်ပယ်အသီးသီးဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆေးဝါး၊ သိပ္ပံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ဒဿနိကဗေဒမှအစ အခြားသော လစ်ဗရယ်ပညာရပ်များမှ ထူးချွန်သူများမှ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်ထားသူ၏ ဘွဲ့ရရှိသည့်အချိန်မှာ (၁၀) နှစ်ကျော် မဖြစ်ရပါ။
လျှောက်ထားသူသည် မဟာဘွဲ့ရရှိထားပါက ဘွဲ့ရရှိထားသည်မှာ (၇) နှစ်ထပ်ကျော်လွန်ခြင်းမဖြစ်ရပါ။
လျှောက်ထားသူသည် သမားတော်ဘွဲ့ရရှိထားပါက ဘွဲ့ရရှိထားသည်မှာ (၅) နှစ်ထပ်ကျော်လွန်ခြင်းမဖြစ်ရပါ။
ဘွဲ့လွန်တက်နေသောကျောင်းသားများနှင့် လက်ရှိမှာ တက္ကသိုလ်တက်နေသော ကျောင်းသားများလည်းလျောက်ထားခွင့်ရှိတယ်။
ရွေးချယ်ခံရသောသူများမှာ မိမိစိတ်ကူးများကို တင်ပြရန်အတွက် (၃) မိနစ်အချိန်ရပါမည်။ ထိုအတွက် အမည်ပါဝင်သော မိတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်း၊ မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကြောင်းအရာ (၂) ခုပါဝင်သော PPT-slides (၃) ခုကို ပြင်ဆင်ရပါမည်။
အနိုင်ရရှိသူမှ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၉) ရက်နေ့တွင် ဘာလင်သို့ သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့၊ ဘာလင်မှာပြုလုပ်သွားမဲ့ Falling Walls နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာမှ ထူးချွန်ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (၁၀၀) ထဲမှ တစ်ယောက်အဖြစ် အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ခရီးသွားလာစရိတ်နှင့် နေထိုင်စရိတ်များကို Falling Walls ဘက်မှ ကျခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အနိုင်ရရှိသူမှ နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ထင်ရှားသော သိပ္ပံပညာရှင်များမှ ၄င်းတို့ရဲ့သုတေသနများကို (၁၅) မိနစ်စီတင်ပြသွားမဲ့ International Falling Walls Conference ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Falling Walls Foundation မှပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများအားလုံးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းအား ပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာများကို Falling Walls Website: http://www.falling-walls.com/lab/apply တွင်သာ တင်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ ဖြစ်ပါတယ်။
The Falling Walls Lab Myanmar is now calling outstanding talents, innovators and high potentials with groundbreaking ideas from Myanmar.
As for the eligibility criteria,
What can the finalists expect?
Every participant has exactly3minutes to present – that is what makes every Falling Walls Lab fast-paced and exciting. Every scholar should prepare3PPT-slides: 1 introductory slide with name, institution and title of presentation, and2content slides.
The winner will travel to Berlin on 7-9 November 2022
The winner qualifies directly for the Lab Finale in Berlin on7November 2022 as one of 100 international and interdisciplinary participants (travel costs and accom¬modation are covered).
The winner is awardedaticket for the international Falling Walls Conference on9November 2022 where some of the world’s most prominent scientists from around the world present their current breakthrough research in 15 minutes each.
The Falling Walls Foundation will review all incoming applications and provide the hosting institutionafinal list of applications which will only include eligible applicants.
All applications have to be made on the Falling Walls Website: http://www.falling-walls.com/lab/apply
The deadline is 24th July, 2022.
Next The Applications are being reviewed by the Selection Committee!